Caancala Saagi - Kutaa - Kutaa, yk Dhangeessi - Kutaalee filadhu
Caasimmi waliigalaa kan ajajii DDE tokkoo: "<Server> <Topic> <Item>" ta'a, yammuu kaadima/server jechuun maqaa DDE fayyadama isa deetaa sana qabatee; mataduree/Topic jechuun bakka Maalimichaa(irracaala maqaa faayilaa); akkasumaas Maalimaa/Item jechuun ammoo wanta qabatamaa jechuu bakka bu'a.
Galmee kutaalee koronyatan of keessaa qaban yammuu bantu, qoronyoowwan sana haaroomsuuf mirga siif laatu.
Kutaan tokkoo; yoo fuulli, irraantoon, jalaantoon, ibsi dabalataa, goodayyaan, yk man'een gabatee tokko isa malee damee kan biraa hinqabaatiin, dhooksuuf hin danda'amu.
Fakkeenyii kan birraan, gegeeddaramaa dirree "x" n uummachuu fi gatii isaa 1tti qixxeessuudha. Sana booda, kutaa warra akka "x qi 1" dhooksuuf, gegeeddaramaa kana irratti hundaa'uun mala tokko ifteessi. Yoo kuticha mul'isuu feetes, gegeeddaramicha "x" gatii isaa "0"tti qixxeessi.
Galmeen ammaa galmee unkaalee X yoo tahe, iddoo qaaqa kanaa argiita. .
Galmee dubbisqofaa keessaatti kan gulaalamuu danda'u.
Galmichi halaataa dubbisqofaatiin yoo baname illee, qabiiyyee kutichaa gulaaluuf akka hayyamamu filadhu.
Caasima kan haalawwanii
Title is: Kutaa